Nanao fihetsiketsehana ireo mpandeha tafahitsoka tao amin’ny seranam-piaramanidin’i Istanbul · Global Voices teny Malagasy
Tena mora lasibatry ny toetr'andro ratsy ny seranam-piaramanidin'i Istanbul vaovao
Voadika ny 25 Febroary 2022 3:11 GMT
“Fiaramanidina migorisa ao anaty tafiotran-dranomandry” avy amin'i Anirudh Koul, nampiasana lisansa CC BY-NC 2.0
(Lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny 26 janoary 2022)
Noho ny firotsahan-dranomandry be tsy mahazatra tany Torkia ny alin'ny Alahady 23 Janoary, nofoanana avokoa ny fivezivezena tamin’ny lalan-dehibe, ny fitaterana an-tanàndehibe ary ny sidina. Raha nanohy ny sidina ny zotram-piaramanidina sasany, dia mpandeha an'arivony no tafahitsoka tao amin'ny seranam-piaramanidin’i Istanbul, nanosika ny olona sasany handray fepetra.
Mihitsoka ato amin’ny seranam-piaramanidina #IST izahay mandritra ny 30 ora tsy misy fanampiana na valiny avy amin’ny @TurkishAirlines. Manomboka manao fihetsiketsehana ny mpandeha. #getusout pic.twitter.com/e8ytq0Ic8N
Sary tsy fahita firy sy mahagaga. Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena vaovao any Istanbul, iray amin'ireo seranam-piaramanidina lehibe indrindra any Eoropa, mampiato ny sidina rehetra noho ny filatsahan-dranomandry be.
Tsy ny mpandeha ihany no tafahitsoka fa ireo mpiasan’ny sidina ihany koa.
Sary mampitolagaga avy ao amin'ny seranam-piaramanidin'i Istanbul, heverina ho lehibe indrindra/lafo/maoderina indrindra (afa-tsy ilay trano fisakafoana, toa ny Burger King, ary tsy misy metro). Mampiseho koa ny mpiasan'ny sidina tafahitsoka toy ny mpandeha taorian'ny firotsahan-dranomandry be. Ampahany kely amin'ny vokatry ny kapitalisma kiantranoantrano.
Zava-niseho tao amin'ny seranam-piaramanidin’i Istanbul @igairport izay nikatona noho ny fihotsahan-dranomandry be. Mpandeha an'arivony tafahitsoka no voatery natory teny amin'ny dabilio satria voasakana ny fifamoivoizana tamin’ny lalana mandroso sy mivoaka ny seranam-piaramanidina. Avy amin'ny namana iray izay voatery nijanona nandritra ny alina ny sary ary natory teo ambony dabilio. ic.twitter.com/qDB2JTMYW9
ISTANBUL, 25 janoary (Reuters) – Naato indroa andro ny sidina tao amin'ny seranam-piaramanidin’i Istanbul ary voasakana ny fiaran’olon-tsotra tamin'ny araben'ny tanàna ny Talata, noho ny filatsahan'ny ranomandry be dia be izay nanakorontana ny fifamoivoizana ary nahatonga ny olona ho tafahitsoka tao an-tanàna lehibe indrindra ao Torkia sy manerana ny firenena.
Tamin'ny 23 Janoary, nanome toky ireo mpandeha ny mpitantana ny seranam-piaramanidin’i Istanbul fa “hitohy tsy tapaka ny sidina.” Niova anefa izany ary ny 24 Janoary lasa teo, nisioka ny mpitantana ny seranam-piaramanidina fa haato hatramin'ny 4 ora maraina ny 25 Janoary ny sidina rehetra. Ary nitohy indray hatramin'ny 1 ora tolakandro, ora any an-toerana, ny fiatoana. Araka ny Flightradar24, sampan-draharaha mpanara-maso ny sidina manerantany, 1.500 eo ho eo no sidina nofoanana hatramin'ny nisian'ny tafio-dranomandry tao amin’ny seranam-piaramanidina lehibe tao an-tanàndehibe.
Nanambara tamin'ny alàlan'ny Twitter i Bilal Ekşi, Tale Jeneralin'ny Turkish Airlines (THY) fa “niverina tsikelikely amin’ny laoniny ny sidina” ary nanomana sidina miisa 131 eo anelanelan'ny amin’ny 7 ora maraina ka hatramin’ny 1 ora tolakandro ny 26 Janoary ny Turkish Airlines. Tamin'ny fotoana nanoratana (ny teny anglisy), mbola misy mpandeha sasany tafajanona sy miandry ny sidin’izy ireo.
Kaonty Twitter maneso iray no nivazivazy fa nandefa polisy misahana ny rotaka ny manampahefana handefa baomba mandatsa-dranomaso ireo mpandeha raha niresaka ny fomba fanaon’izy ireo amin’ny fomba fifehezana maherisetra ny fihetsiketsehana.
Polisy misahana ny rotaka nalefa tao amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul mba hisahana ireo mpandeha manao fihetsiketsehana nihitsoka https://t.co/vMc7EUH8MO
Mpisera Twitter iray hafa nizara ny sarivongan-dranomandry nataon’ireo mpiasan'ny seranam-piaramanidina teo amin’ny lalana.
Saingy na inona na inona mitranga, misy ary hisy foana ny olona manan-talenta amin’ny famoronana, na dia ao anatin'ny toe-javatra sarotra aza.
Nanome tsiny ny toerana nananganana ny seranam-piaramanidina Istanbul vaovao ny olona sasany. “Naorina teo amin'ny morontsiraky ny Ranomasina Mainty ny seranam-piaramanidina vaovao lafo vidy, miaraka amin'ny rivotra mahery avy any avaratra (107 andro/taona), tafio-drivotra, ary rakotra rahona matevina (65 andro/taona) fa tsy tany amin’ny morontsirak'i Marmara. Tsy afaka miady amin'ny vohon-tany sy meteorolojia ianao,” hoy i Yoruk Isik, mpanoratra ny tranonkala Bosphorus Observer raha nisioka.
Nanohitra ny toerana nanomboka tamin'ny fanombohan'ny tetikasa tamin'ny taona taona 2016 ireo manam-pahaizana momba ny fiaramanidina, nilaza fa tsy misy fiarovana avy amin'ny rivotra avy any avaratra ny toerana ary mety voakorontan’ny rahona sy ny zavona.
“Hita tamin’ny fandrafetana izany fa hisy olana amin’ny fipetrahana sy ny fiaingan’ireo fiaramanidina. Nambaran’izy ireo fa manao fanadihadiana momba ny toetr’andro ao anatin’ny drafitrasa izy ireo, saingy tsy mifanakaiky amin’ireo seranam-piaramanidina nanaovana fananganana mba hanomezana angondrakitra ny toby nahazoan’izy ireo angondrakitra. Noho izany dia tsy nampidirin'izy ireo tamin'ny fanapahan-kevitr'izy ireo fa hisy fiantraikany lehibe amin'ny seranam-piaramanidina ny rivotra avy any avaratra ary mety hisy olana amin'ny fipetrahana sy ny fiaingan'ny fiaramanidina,” hoy i Bianet, Esin Koymen, lehiben'ny sampana Injeniera misahana ny Tanandehibe ao Istanbul.
Nanamarika i Koymen fa mbola niasa ihany ny seranam-piaramanidina Atatürk na dia ahitana ranomandry mitovy amin'izany aza izy io.”Azo atao izany, satria ara-dalana tsara ny toerana misy an'io seranam-piaramanidina io raha jerena ny angondrakitra momba ny toetr'andro nomena tamin'ny fotoana nanorenana azy,” hoy i Koymen. Nigadona tao amin'ny seranam-piaramanidina Atatürk anefa ny minisitry ny atitany Süleyman Soylu sy ny minisitry ny Fitaterana sy ny Fotodrafitrasa Adil Karaismailoğlu rehefa tonga tany Istanbul izy ireo. Maro no niditra tao amin'ny Twitter mba hitaky ny hanokafana ny seranam-piaramanidina Atatürk ho an'ny besinimaro amin'ny ampahany satria manana fidirana mivantana amin'ny metro ny seranam-piaramanidina misy azy.
Ny hafa kosa nanakiana ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa fitaterana ampy manodidina ny seranam-piaramanidina vaovao. Ny hany fomba hahatongavana amin'ilay toerana vaovao dia amin'ny alàlan'ny fiara manokana, taksy, na orinasa mpitatitra. Nilaza ilay mpanao gazety Ismayil Saymaz tamin'ny sioka hoe, “Olona miisa 25.000 no tafahitsoka tao amin'ny seranam-piaramanidin’i Istanbul. Satria nakaton'ny governemanta ny Seranam-piaramanidina Atatürk, izay misy fidirana amin'ny metro, ary nosokafan’izy ireo ny seranam-piaramanidina Istanbul tsy feno ho an'ny besinimaro, mba hamitana ilay ‘tetikasa adala’ ara-potoana amin'ny fifidianana. Ny volanay no nandoavana an’io tsy fahaiza-manao io omaly sy anio”.
Tonga tao Istanbul ny Minisitry ny Atitany sy ny Fitaterana ny Talata 25 Janoary ary namoaka fanambarana ho fanentanana ireo tompona fiara hijanona any an-trano ary raha ilaina dia mampiasa fitateram-bahoaka mandra-pisian'ny toromarika vaovao. Nandefa ny mpianatra nody hatramin'ny 31 Janoary ny Oniversite taorian'ny fanambaran'ny Governoran’i İstanbul Ali Yerlikaya. Nilaza ihany koa ny governora fa nalefa niala sasatra ny mpiasam-panjakana, ny mpiasa tsy miankina, afa-tsy ny mpiasa miandraikitra ny fiarovana, sy ny fahasalamana ary ny mpiasan'ny fitaterana, araka ny filazan'ny tatitry ny Bianet.